QUMMANKA CALOOSHA IYO MINDHICIRRADA: GURYAHA DAWOOYINKA, CONTRAINDICATIONS, CUNTADA SIDA LOO ISTICMAALO - CUMIN
Ugu Weyn Ee Cumin
Noocyada saameynta qumbaha caloosha iyo mindhicirka
Cumin - warshad gaar ah, oo loo yaqaan 'spice', ayaa loo isticmaalo ma aha oo kaliya jihada culeyska, laakiin sidoo kale waa wakiilka daweynta xanuunka caloosha.
Ku saabsan waxtarka faa'iido leh ee ku saabsan jirka iyo xeerarka codsiga ayaa looga doodi doonaa hoos.
Qeexida Botanical ee geedka
Cumin - Biennial biennial or long-term agent ee Dalladda qoyska. Waxay ku dhacdaa gobollada dabiiciga ah ee Europe iyo Aasiya.
Xuddunta ee cawska waxay gaari kartaa 20 cm dherer ahaan. Xoog, tabo-gal, fareem. Taararka caleenta waxaa lagu diyaariyaa astaamaha xiga. Markaad u dhaqaaqdo dhinaca sare ee caleemuhu way yar yahiin. Hayso qaab labajibbaaran ama saddex gees ah. Qeybta sare ee caleemaha waxay ku fadhiisaneysaa petioles gaaban oo leh hoosta haweenka, qaybta hoose waxay ku qoran yihiin warqado dheer.
Ma taqaanaa? Esoteric wuxuu ku dabaqaa jumlada sida qayb ka mid ah awoodda jacaylka. Qayb ahaan, waxaa lagu doodi karaa in dhirta noocan oo kale ah ay saameyn ku yeelan karto dhibbanaha, taniyo dhirta waa dabiiciga ah dabiiciga ah oo soo jiidanaya rabitaanka jahannamada.
Sanadka ugu horreeya ee ka dib biqilka abuurka, rosette basal ah basal ayaa la sameeyay; labaad, korriinka stem ayaa lagu arkay. Waxay noqon kartaa:
Gudaha gudihiisa waa meel bannaan. Qaabkeeduna waa mid qulqulaya.
Cawsku wuxuu galayaa marxaladda ubaxa sanadka labaad ee nolosha. Heerkani wuxuu bilaabmaa Juun - July. Dhamaadka caleemaha, waxaa la sameeyaa duufaan adag oo isku dhafan. Duufaanku wuxuu ku jiri karaa ama aan laheyn. Ubax yar, pyatilepestkovye. Midab cad.
Tani waa duufaan aan caadi ahayn, oo loo qaybiyay laba nooc oo khudrad ah. Miraha bislaadaan July - August.
Kiimikooyinka iyo fitamiin
Halabuurka dhirta boqortooyada waxaa ku jira dhowr fitamiin.
fitamiin D, E;
Waa muhiim! Waa suurtagal in la soo saaro fitamiino, waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo wada baabbi'iyo. Ka dib marka laqaado, fitamiinada ayaa laga saaraa 6 saacadood ka dib.
Qayb muhiim ah ayaa waxaa ku jira waxyaabo kiimiko ah sida:
saliida muhiimka ah;
Qalabka dawooyinka ee qumman
Cumin - waa daaweyn dad wax ku ool ah, taas oo loo isticmaalo sidii loogu talagalay daaweynta guud ee cudurrada mawduuca mindhicirka. Si firfircoon loo isticmaalo calool-fadhiga, colitis daba-dheeraan ah, xanuunka qandhada, iyo qandhada sare.
Faa'idada fitamiinada iyo macdanta macdanta ayaa ka caawiya soo celinta xabka xiidmaha, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka takhalusid isdifaaca iyo shuban iyadoo la dedejinayo joojinta sunta sunta jirka.
Baro wax badan oo ku saabsan waxa weedhuhu u fiican yahay jirka bani-aadmiga.
Intaa waxaa dheer, inta badan qaybaha ku jira abuurka, waxay kicisaa xoojinta darbiyada gudaha iyo xididdada dhiigga, dib u soo celiyaan kiimiko caadi ah, taas oo saameyn togan ku leh xaaladda bukaannada qaba GERD. Cudurkaan waa mid dabadheer, waxaana lagu gartaa marxalado qashin ah oo casiir ah iyo / ama duuduubka qaybta duuban ee hunguriga, taas oo keenta boogta qaybta hoose.
Isla sidaas ayaa quseeysa xanuunka qanjirada dabiiciga ah iyadoo leh joogto ah oo kor u kaca ah. Xaaladaha dhaawacyada xuubka, saliidaha lagama maarmaanka ah ee abuurka cumin waxay si firfircoon u soo celinayaan derbiyadooda, taas oo saameyn ku yeelatay saamaynta.
Xannibaadda nidaamka difaaca jirka ayaa si wax ku ool ah u difaaci kara jirka ka dib weerarka sunta waxyeelada leh ee dibedda marka la eego daciifinta ugu weyn ka dib marxaladaha sii xumeynaya cudurrada caloosha.
Saliidaha lagama maarmaanka ah ee ku jira abuurka, kicinta wax soo saarka hoormoonada, taas oo kuu ogolaanaysa inaad dib u soo celiso nidaam xasaasiyadeed oo xasilan PMS haweenka iyo cudurrada ragga. Enzymes waxay leeyihiin saameyn kicin leh nuuca yar.
Iyada oo dib loo soo celiyo hoormoonada iyo kicinta wax soo saarka oxytocin, foosha is-goysyada ayaa la dardargelin karaa xilliga dhalmada kadib. Cumin si firfircoon ayaa loo isticmaalaa hargabka, oo ay weheliso qufac iyo neef. Waxay leedahay saameyn, khafiifinta khafiifka ah ee joogitaanka bronchitis hor istaagto waxayna ku nuujineysaa buro-bosninjoojin leh qufac qalalan.
Saameynta firfircoon ee nidaamka kaadi-mareenku waxay gacan ka geystaan ​​is-galka degdeg ah ee dheecaanka xad-dhaafka ah. Tilmaamaha xayawaanka ayaa gacan ka geysta kala diridda dhagxaanta kalyaha.
Waxyaabaha fitamiinada leh ee hodanka ah waxay ku siinayaan dib u soo celinta unugyada jirka ee heerkulka. Saameyn faa'iido leh nidaamka dareenka, oo hagaajiya tayada hurdada, waxay yareyneysaa welwelka.
Saliid caraway sidoo kale waxaa loo isticmaalaa fangaska maqaarka, boogaha, boogaha iyo finanka dibadda. Waxay leedahay saameyn jeermiska, xakamaynta soo saarka sebumta.
Saliida shiidaalka waxaa sidoo kale loo isticmaalaa carruurta aan lahayn da'da da'da ee jiritaanka cudurada maqaarka ee fangas ama infekshanka qashin-qubka. Laga soo bilaabo da'da 6, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo hargabyo kala duwan, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa sida qayb ka mid ah tallaalka immunomodulatory.
Waa muhiim! Inkastoo aysan jirin xayiraad da'da loogu talagalay isticmaalka dibedda, hadana kiis kasta, waa inaad marka hore sameysaa baaritaanka, hoos u dhigista 1 dhibcood ee daaweynta loo isticmaalo ee curcurka. Haddii 1 saacadood ka dib aan lahayn casaan, cuncun, barar barar, waxaa laga codsan karaa aagga ay dhibaatadu saameysey.
Qaadashada cumin waxay kicineysaa qanjidhada thymus, taas oo si toos ah u saameeysa waxqabadka jirka ee unugyada difaaca. Waxay leedahay saameynta suuxinta iyo suuxinta.
Sida loo isticmaalo duufaanka caloosha iyo mindhicirrada
In dagaalka ka dhanka ah xanuunada of hawlaha dheefshiidka, fuska iyo decoctions ee cumin abuur ah ayaa loo isticmaalaa.
Wixii faleebo waxay u baahan doontaa:
300 g oo ah abuurka cumin;
1 litir oo biyo ah karkaraya.
Qalabka cagaarka ku shub biyo karkaraya kuna adkeyso 12 saacadood. Waxaa fiican inaad soo saarto faleebo habeenkii. Subaxii, ciriiri oo ku luqluqo 1: 2 biyo. Cab cabitaan this u baahan 1-2 toddobaad, saddex jeer maalintii, 100 ml. Si loo wanaajiyo dhadhanka, waxaad isticmaali kartaa malab ama adoo isticmaalaya shaaha. Carruurta da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 14 sano ayaa yareysa qiyaasta kala badh.
Si aad u sameysid decoction waxaad u baahan doontaa:
2 tbsp. l abuurka;
Biyuhu waa in la keeno karkariyo meelo lagu kariyo. Ka dib markaa, weelka waxaa lagu meeleeyaa biyaha qubeyska, oo caadka lagu dhaqaa 15 daqiiqo. Waxyaalaha ay keentay waxay ku adkaysanayaan 45 daqiiqadood, cabin 2 tbsp. l 3 jeer maalintii. Carruurta - 1 tbsp. l 2-3 jeer maalintii. Waad kordhin kartaa tayada adoo adeegsanaya adoo ku daraya korriin. Si aad u diyaariso decoction la koriye, miraha dhirta labadaba waxaa lagu qaaday 1: 1 saamiga. Sidaas, 400 ml oo biyo ah waxay u baahan doontaa 1 tbsp. l qumman abuurka iyo dhirta. Habka diyaarinta waa isku mid. U qaado maraq ilaa 1 tbsp. l 3 jeer maalintii, carruurta - 0.5 st. l
Sannadka waxaad u baahan tahay inaad qabato koorsooyin dhowr ah. Habkani wuxuu si gaar ah wax ku ool u yahay cudurrada raagtay ee joogtada ah. Tusaale ahaan, koorsadu waa 14 maalmood. Ka dib 20-30 maalmood waxaa mar kale lagu celiyaa. Carruurta leh ujeedada hagaajinta difaaca iyo ka hortagga cudurrada caloosha ayaa noqon doona 2-3 koorso sanadkiiba muddo 7-10 maalmood ah.
Baro, ka badan bur iyo saliida caraway madow waxay faa'iido u leeyihiin qofka.
Sida loo doorto oo loo kaydiyo qashinka
Iibsashada sharoobada, fiiro gaar ah u eeg heerka qallalan. Miisaanka waa inuu noqdaa mid cidhiidhi ah, miraha nafaqaduna waa ay dhammaadaan. Sidoo kale qiimaheeda waa in la fiiriyo urta dhirta. Waa inay ahaato basaas, basbaas, iyo waraaqo miyuusan, hodan ah. Ku dhaji baastada si aad u qalajisid qalabka wax lagu dhejiyo, oo si adag loo daboolo. Meelaha kaydinta waa inay ahaadaan kuwo madow, oo leh qoyaan aan ka badneyn 50%. Nidaamka heerkulka wax badan maaha, laakiin waa inuusan ka hooseeynin + 6 ° C. Nolosha shafka ah ee shuruudaha oo dhan aan ka badnayn 5 sano.
Contraindications iyo waxyeellooyinka soo noqnoqda
Isticmaalka shumaca ayaa ka hortageysa:
oo leh shakhsiyad xumo shakhsiyeed;
xasaasiyadda cagaarshow oo kale oo la mid ah cumin;
carruurta ka yar 6 sano jir;
muddada ka danbeysa wadnaha wadnaha.
Waa muhiim! Marka la daaweynayo cudurka kansarka leh nidaamyada kemotherabi, isticmaalka xajinta ayaa si weyn u yareyn karta saameynta daaweynta.
Maaddaama ay saameyn ku yeelato marka la isticmaalo gudaha iyo dibadda waxay muujin kartaa lafteeda:
urtikaria, cuncun, barar.
Waxyeellada abuurka geedka ee su'aasha ah ayaa la samayn karaa haddii qiyaasta tallaalka lagu taliyo ay dhaafsiisan tahay, ama haddii uusan qofku ogayn in uu leeyahay dulqaad aan loo baahneyn sheygan. Qumaan ma aha oo keliya uun, laakiin sidoo kale daroogo ayaa kuu ogolaanaysa inaad soo celiso shaqeynta habka difaaca jirka iyo habka caloosha. Haddii soo-dhaweynta lagu heshiiyo dhakhtarka iyo dhammaan shuruudaha ku saabsan qiyaasaha la isticmaalo la daboolay, wax saameyn ah ma leh.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cumin 2019